Sida looga baxo murugada: tilmaamaha iyo caadooyinka | Ragga Stylish
Niyad jabku waa xaalad dad badani soo maraan inta ay nool yihiin. Waa gobol aad naftaada iyo dadka kugu xeeran oo dhan aad ka xumaato. Uma arkaysid wax si togan u socda taasina waa in wax walba ay khaldami doonaan. Dhibaatooyinka nafsaaniga ah sida culeyska iyo walwalka ayaa ku qabsanaya oo noqda kuwa soo noqnoqda maalin kasta. Sida looga baxo murugada Waa mid ka mid ah su’aalaha dadku aad u weydiiyaan.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa xoogaa tilmaamo ah oo lagu baranayo sida looga baxo murugada.
1 Sida looga baxo murugada
2 Sida looga baxo niyad-jabka: iska ilaali is-nixinta
3 Iska iloow wixii tagay oo si fiican wax u cun
Waxa ugu horreeya ee lagugula taliyo markaad ka soo baxdo niyad-jabka waa inaad waqti siiso naftaada. Waa wax iska caadi ah in wax argagax leh aysan inta badan dhicin, sida niyad jab jaceyl, shaqo la’aan, dhaqaaqida qof kuu dhow, iwm. Waa caadi in aad xumaato in cabaar ah. Waa waqtigii aan maarayn lahayn la qabsashada wixii nagu dhacay oo aan isku dayeyno inaan la noolaano. Waxaa jira dhibaatooyin nolosha ka jira oo aan lahayn wax xal ah oo ay tahay inaan si fudud u baranno sida loola noolaado.
Isbedelada nolosheena waxay ku yimaadaan si lama filaan ah munaasabado badan. Si loo xaliyo dhibaatooyinka la yimaada isbedeladaan nolosha waa inaan helnaa waqti la qabsi gaar ah oo aad aqbasho isbeddeladan oo aad mar labaad dhaqaajiso. Way fiicantahay in waqti la qaato oo aan lagu degdegin waxaadna arki doontaa sida ay waxyaalaha isu soo celinayaan meeshiisii ​​ama meel cusub. Ka tagida aaga raaxada waxay noqon kartaa wax qofka ku abuura walaac weyn. Sidaa darteed, waa tan ugu fiican naftaada u hur waqti ku filan si aad ula jaanqaadi karto xaaladaha cusub.
Mid ka mid ah talooyinka inta badan la siiyo dadka qaba niyad-jabka ayaa ah inaad la wadaagto dareenkaaga qof kale. Waa inaad heshaa qof aad kalsooni ku qabtid si aad ugu raaxeysatid kahadalka dhibaatooyinkooda. Ha u maleynin inaad qof ku dhashey dhibaatooyinkaaga, laakiin qofkaasi wuxuu dareemi doonaa nasiib inuu noqdo qofka aad ku kalsoon tahay. Way adag tahay inaad dadka kale kala hadasho waxa aad dareemeyso, maadaama ka hadlkeeda ay ka xanuun badan tahay isla markaana kaa dhigeyso tabar daran. Waxaan kaloo haystaa dad aan rabin inay damqadaan ama doorbida inay xanuunka keligood qaataan.
Waa inaad ogaataa inaad qaadatay qandaraasyo waxa keena qof daciif ah. Sifudud waxaad isu muujineysaa sidaad tahay. Haddii aad dareento in qofna uusan agtaada rabin inuu ku dhageysto, waxaad ku dhaqaaqi kartaa inaad tahay inaad qaaddo tallaabada ugu horreysa. Xaqiiqdii waad layaabi doontaa naxariista aad ka heli karto kuwa kuugu dhow. Dadka oo dhami isku dareen ma aha marka ay timaado dhageysiga dhibaatooyinka qaarkood iyo fahamka shucuurta qalafsan ee dadka kale. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad ogaato sida wanaagsan ee loo doorto qofka aad doonayso inaad u sheegto waxyaabahaaga ka hor.
Sida looga baxo niyad-jabka: iska ilaali is-nixinta
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah markay tahay barashada sida looga baxo murugada ma aha is-naxariisasho. Waa inaad ogaataa inaadan ku farxin dhoobada, sida ay caan ku tahay, maadaama ay tahay waxa ugu fudud ee la sameeyo. Way fududahay in laga qoomameeyo dhamaan wixii kugu dhacay iyo isagoo dareemaya sida qofka ugu dhibta badan adduunka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dhageysato sheekooyinka dadka kale, waxaad arki doontaa inaadan ahayn qof gaar ah. Qof kasta oo adduunka ku nool waxa haysta dhibaatooyin maalin kasta oo ay tahay inuu barto xallinteeda iyo la qabsashadiisa. Had iyo jeer waxay ku saabsan tahay dadka adiga kaaga daran. Micnaheedu maahan inaad ku tiirsanaato inay jiraan dad kaa waqti xun adiga oo dhibaatooyinkaaga aan micno lahayn. Mararka badankood, dhibaatooyinka halista ah waxay ku dulwareegayaan ahmiyada uu qofkasta siinayo.
Waxaad ogaan kartaa in dadka intiisa badani durba soo mareen xaalado aad u xanuun badan oo ay awood u yeesheen inay ka gudbaan. Maaddaama dadka oo dhan ay tahay inay soo maraan tan, adigana waad ka gudbi kartaa.
Ka bixida guriga waxay noqon kartaa ikhtiyaar aad u wanaagsan maadaama xirnaashaha aysan wax ka taraynin sinnaba. Waa inaad ka go'daa shabakadaha bulshada, dami TV-ga oo aad banaanka u baxdid. Socdaal dheer ayaa kaa caawin kara inaad ka adkaato welwelka ama aad sameysid ciyaaro qaar. La kulan qof, ku dabaalan barkadda ama xeebta, wax kasta oo ay ka dhigan tahay in aan lagaa xidhin.
Tilmaam kale oo ku saabsan barashada sida looga baxo murugada ayaa ah inaad dibadda u baxdo xitaa haddii aadan dareensanayn. Ka tag guriga wuxuu kiciyaa maskaxdaada wuxuuna fududeeyaa jiilka serotonin. Serotonin waa neurotransmitter oo ku shaqeeya qawaaniinta niyadda.
Iska iloow wixii tagay oo si fiican wax u cun
Waa inaad ka fikirtaa wixii tagay inay soo dhaafeen dibna u soo laaban doonin. Kuwani waa mid ka mid ah weedhaha ay tahay inaad ku qorto maskaxdayda haddii aad rabto inaad ogaato sida looga baxo murugada. Wixii ka hadhay hadda ma aha. Waa inaad ka fikirto taas tusaale ahaan, markaad diyaarad raacayso oo aad ku aragto buur baraf aad u weyn oo qurux badan oo fog, 10 daqiiqo kadib buurtaasi way tagtay. Waxay ka dhigan tahay buurtan mar hore ayaa la soo dhaafay oo mar dambe ma arki doontid. Si kasta oo aad daaqadda uga eegtid markale, arki maysid isla buurtaas. Si kastaba ha noqotee, waxaad awoodi doontaa inaad aragto buuro kale, magaalooyin, badaha iyo wabiyada u dhigma ama ka sii badan buurtii hore.
Tani waa sida ay tahay inaad uga fikirto inaysan wax waligeed jiri doonin wax walbana dhammaad leeyihiin. Si kastaba ha noqotee arrimuhu hal mar uun ayey dhammaadaan oo wax kasta oo ka horreeya taas oo kale waa wax aan ka ahayn horumar. Waa inaad barataa inaad ku raaxaysato safarada cusub iyo farxadaha yar yar ee nolosha ku siisa.
Hal talo oo la siiyo kuwa raba inay bartaan sida looga baxo murugada ayaa ah inay sax cunaan. Mid ka mid ah isbeddelada dabeecadeed ee dadka qaba niyad-jabka ayaa si xun u cunaya. Gabi ahaanba waa la dayacay jir ahaan iyo maskax ahaanba. Tani waa qalad aad u culus. Cuntada aad cunayso maalin kasta waxay si toos ah saamayn ugu leedahay niyaddaada. Waxaa jira habab kiimiko ah oo maskaxdaada ka socda oo kaa dhigi kara inaad fiicnaato ama ka sii xumaato iyadoo kuxiran waxaad cunayso. Waa inaad sifiican uga taxadartid waxaad cunaysid si aad ladnaan ugu dareento.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida looga baxo murugada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sida looga baxo murugada